S&P 500 ၏ခွေးများ - အပြာရောင်ချစ်ပ်မတည်ငြိမ်မှု - ပို၍ စိတ်ငြိမ်သက်မှု - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
S&P 500 ၏ Dogs - အပြာရောင်ချစ်ပ်မတည်ငြိမ်မှု - ပိုငြိမ်းချမ်းသောစိတ်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 17, 2019 ဇူလိုင်လ 16, 2020 S & P 500 ၏ခွေးများ ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, Corporate Bonds, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, အဆိုပါ Dow 2020 ၏ခွေး, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
Durig Capital သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်နေသောစျေးကွက်များသို့မည်သည့်နေရာ၌လှည့်လည်နိုင်သည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာသည်
ပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်ကျော်က အမေရိကန်နှင့်တရုတ်အကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွား အခွန်အခအသစ်များထပ်တိုးလာခြင်း၊ အချို့သောအဓိကနိုင်ငံရေးပါတီများ၏သဘောထားများထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းစသည်တို့သည်အချို့သောစျေးကွက်ညွှန်းကိန်းများသည်တစ်နေ့တည်းတွင်ရာပေါင်းများစွာသောအချက်များကိုရာနှင့်ချီ။ ခုန်ချခြင်းနှင့်အတူမတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာတို့သည်မီးဖိုချောင်ကိုလုံးဝစွန့်ခွာစရာမလိုဘဲအပူကိုအနိုင်ယူရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖွေနေသည်။ ဒီအပတ်, Durig Capital ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက၎င်း၏နှင့်အတူရုံလုပ်နိုင်ပုံကိုရှင်းပြသည် S & P 500 အစုစု၏ခွေးများ.
စျေးကွက်မြင်ယောင်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခု မတည်ငြိမ်မှု စျေးကွက်ညွှန်းကိန်း၏သမိုင်းဇယားကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း S&P 500 ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမတည်ငြိမ်မှုမရှိလူစိမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မတည်ငြိမ်မှုကသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားနည်းစေတယ်လို့လူအများကယုံကြည်ကြသည်။အောက်ပါဂရပ်အပေါ်အနီရောင်အချက်များ) ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကတိုးမြှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးသောဤတူညီသောမတည်ငြိမ်မှု (အောက်ကဂရပ်အပေါ်အပြာရောင်မြှား).
S&P 500 - ၁ နှစ်ဇယား
အဖြစ်မှန်၌မတည်ငြိမ်မှုသည်ကောင်းသည်ထက်ဆိုးသည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ယုတ္တိရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်ဆုံးရှုံးမှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်သိသာထင်ရှားသည့်အမြတ်အစွန်းထက်များစွာသာလွန်သည်။ လူအများကမတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောသိသာသောအောက်သို့ဖိအားကိုသူတို့မဖော်ထုတ်လိုကြပါ။ စျေးကွက်။
အချို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားရည်ညွှန်းရန်ပုံငွေများမှအခြား“ လုံခြုံသောနေရာ” ပိုင်ဆိုင်မှုများသို့ရွေ့လျားစေသည့်အကြောင်းရင်းများစွာမှာစျေးကွက်မငြိမ်မသက်မှုများအတွင်းအကျဘက်မှကာကွယ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။
လျော့နည်းသမိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှု & တိုးတက်လာသောအကျဘက်မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် Durig's S&P 500 Portfolio ၏သမိုင်းတွင်မတည်ငြိမ်မှုများလျော့နည်းနေပုံရသည် (အပေါ်ကပုံကိုကြည့်ပါ) ။ တောင်ထိပ်များနှင့်ချိုင့်ဝှမ်းများသည် S&P 500's များထက်မည်မျှလျော့နည်းသည်ကိုသတိပြုပါ။ ၎င်းကိုဂရပ်ဖစ်တွင်သက်သေပြရုံသာမကအောက်ဖော်ပြပါ S&P 500 TR Idx ကိုစံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်းအားဖြင့်လည်းသင်္ချာဆိုင်ရာအရအတည်ပြုနိုင်သည်။ beta ကို ထုတ်လုပ်သည် (အောက်တွင်).
Durig ၏ S&P 500 Portfolio ၏ခွေးများ Beta ၀.၇၀ ရှိပြီး S&P 0.70 သည် ၁၀% တက်လျှင် Durig's Portfolio သည်သီအိုရီအရ ၇% အထိတက်သင့်သည်။ ဤသည် S & P 500 များအတွက် proxy ဖြစ်သည့်စျေးကွက်နှင့်ဆက်စပ်မှုကိုလျော့နည်းစေခြင်း၊ အစုစုမတည်ငြိမ်မှုများကိုသိသိသာသာလျှော့ချခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့် S&P 10 Portfolio ၏ Durig's Dogs ၏ပိုမိုတသမတ်တည်းရှိသောသမိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုခွင့်ပြုထားသည်။ ဤတွင်စွမ်းဆောင်ရည်အထူးဖော်ပြချက်အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြထားသည်။
တစ်နှစ် -to-date ဖြစ်အောင်ပြန်လာ 12.63%
၏ 1 တစ်နှစ်ပြန်လာ Trailing 8.43%
(အထက် - S&P 500 ၏ရည်ညွှန်းချက်စွမ်းဆောင်မှု Durigs Dogs၊ ၈-၁၃-၁၉)
ဒန် Ariely, Qapital မှအပြုအမူစီးပွားရေးပညာရှင်နှင့် Duke တက္ကသိုလ်မှအပြုအမူစီးပွားရေးပါမောက္ခ, ဒီစျေးကွက်တည်ငြိမ်မှုအပေါ်ပြော CNBC Finance နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း:
“ ဒါကိုအပေါ်နဲ့အောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကပိုပြီးစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ”“ ကျွန်တော်တို့ဟာပိုပြီးစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေဖြစ်ရုံသာမကဒီကိစ္စကိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ငွေချေးစာချုပ်များသို့မဟုတ်ငွေသား - မျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးနိမ့်သူများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောမျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ။ သမိုင်းကြောင်းအရလူတွေဟာအကြီးမားဆုံးအမှားတွေပဲ။
S&P 500, Free Leading Financial News, Market Research နှင့်ပိုမိုသောအရာများဖြစ်သော Dogs မှနောက်ဆုံးသတင်းများရယူရန်စာရင်းသွင်းပါ။
သိသာထင်ရှားသည့်သို့မဟုတ်ကြာရှည်သောစျေးကွက်ဖိအားကိုရင်ဆိုင်ရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်မှုမရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် Durig's S&P 500 Portfolio သည်ခိုင်မာသောသမိုင်းဝင်အမြတ်အစွန်း၊ အပြာရောင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သမိုင်းကြောင်းနည်းပါးသောအချိန်တွင် ၀ င်ငွေတိုးပွားမှုတို့ကိုပြသနိုင်သည်။ အားလုံးနှင့်အလွန်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာစတော့ရှယ်ယာများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုထက်မတည်ငြိမ်မှု။
Dividends နှင့်အတူ Diversified အပြာရောင် Chip စတော့ရှယ်ယာ
ခွငဖြေ - အတိတ်ကစွမ်းဆောင်ရည်ကအနာဂတ်အောင်မြင်မှုရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ မည်သည့်စျေးကွက်ဒေတာသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်ပြဤထုတ်ဝေ 8-13-19 ၏အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ * အသုံးပြုခဲ့သည့်အခြေခံစံနှုန်းမှာ S&P 500 TR Idx ဖြစ်သည်။ ဒီသုံးသပ်ချက်တွင် Durig Capital မှတင်ပြသောအထွက်နှုန်းမြင့်မားသောနည်းဗျူဟာများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းသည် Durig Capital မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များမဟုတ်သကဲ့သို့လုံခြုံရေး ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက်တိကျသောထောက်ခံချက်လည်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သင့်တော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်မချမီမှတ်ပုံတင်ထားသောပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုတောင်းခံသင့်သည်။
2019 abbv adm ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း သြဂုတ်လ ben အပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာ အပြာရောင် Chip စတော့ရှယ်ယာ အပြာရောင်ချစ်ပ် cah အများပိုင်သတင်း cvx အမျိုးမျိုး ခွဲဝေ ခွဲဝေမှုအထွက်နှုန်း ခွဲဝေအထွက်နှုန်း Dividends đi DJIA ခွေး အဆိုပါ DOW ၏ခွေးများ dow Dow Jones Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ ရေ Durig Capital ကို ed emr ရှယ်ယာ GPC မြင့်မားသောမြတ်များအထွက်နှုန်း မြင့်မားသော Dividend အထွက်နှုန်း မြင့်မားသည် မြင့်မားသောအထွက်နှုန်း မြင့်မားအထွက်နှုန်းထိတ် ဝင်ငွေနည်းဗျူဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသုတေသန ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာ kmb ko ခြေထောက် တစ်သက်တာ မိုက်ကယ် B Higgins MMM Nasdaq အဝတ်မပါသော NYSE Pep အစုစု အစုစုကိုမဟာဗျူဟာ ပြန်လာ S&P S&P 500 SP500 စတော့ရှယ်ယာ စတော့ဈေးကွက် စတော့ရှယ်ယာ t tgt လှ wba xom
ဘီလ်ဟာဒေး: အချိန်ခရီးသွား? SNL ဟာသကြယ်ပွင့်သည် 150 နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းသေဆုံးခဲ့သည်။ [ဓာတ်ပုံ / ဗီဒီယို]